नयाँ बर्षमा विश्व ब्राण्डका लिपस्टिक ! – HostKhabar ::
नयाँ बर्षमा विश्व ब्राण्डका लिपस्टिक !
अंग्रजी नयाँ बर्ष शुरु हुना साथ फेशन र सौन्दर्यको दुनियाँमा विश्व बजारमा नयाँ र आर्कषक ब्राण्डका लिपस्टिक आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चलेका यि लिपस्टिकहरु नेपाली बजारमा समेत सजिलै उपलव्ध छन् । केही ब्राण्डहरु र तिनका विशेषताहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
Lakme Crimson Rose Forever Matte Liquid Lip Colour
सौन्दर्यको दुनियाँमा लकमीले आप्mनो ब्राण्ड स्थापित गरेको धेरै भइसकेको छ । यही कम्पनीले यो ब्राण्डको नयाँ लिपस्टिक तथा लिप कलर बजारमा ल्याएको हो ।
यि ब्राण्डका लिपस्टिकहरु Flip cart मा लन्च गरिएको थियो । विभिन्न २० वटा कलर र शेडमा यी ब्राण्ड उपलव्ध छन् भने कम्तीमा पनि १६ घण्टा सम्म यि ब्राण्डका लिपस्टिकहरु ओठमा माधुर्यता देखाउँन सक्षम छन् । ओठमा कुनै असजिलो महशुस नहुने र जस्तो सुकै भोज या खानापछि पनि यिनको माधुर्यता कायमैं रहन्छ ।
Faces Scandalous 13 Ultime Pro Hd Intense Matte Lips + Primer Lipstick
फेसेज क्यानडाले बजारमा ल्याएका यि ब्राण्डका लिपस्टिकहरु सदाबहार ब्राण्डका रुपमा चिनिन्छन् । अधिकांश महिला तथा युवतीहरु यी ब्राण्डका पारखी भएको दाबी छ । नन् स्टिकी फर्मूला प्रयोग गरी तयार पारिएका यि ब्राण्डहरु ओठका लागि अत्यन्त सहज सामग्रीमा पर्दछन् ।
माइका, टाइटानियम डायोअक्साइड, यल्लो ५ लेक, रेड ७ लेक, सिन्थेटिक वाक्स लगायतको समिश्रणबाट तयार पारिएका यी ब्राण्ड जर्मनमा बढि प्रचलित पनि छन् । यिनको बजार मूल्य भारतिय बजारमा साढे ७ सय को हाराहारीमा रहेको छ ।
Nykaa Maithili 25 Matte To Last Liquid Lipstick
न्याक्का कम्पनीले यि ब्राण्डका लिपस्टिक भर्खरै बजारमा ल्याएको हो । पहिलाको भन्दा केही सानो र विभिन्न रंगमा यी ब्राण्ड बजारमा उपलव्ध छन् । भिटामिन ई र एन्टी ओक्सिडेण्टको समिश्रणभएका यी ब्राण्डले युवतीहरुमा बढि लोकपृयता कमाएका छन् ।
विभिन्न प्राकृतिक फलफुल र तेलबाट बनेका यी ब्राण्डका लिपस्टिकको भारतिय बजारमा ५ एमएल मूल्य करिब ६ सय र १ दशमलव २ एमएलको मूल्य २ सय ४० रुपैयाँँ पर्दछ । लिप लाइनरको प्रायोग पछि यसको प्रयोग गर्दा निकै आर्कषक देखिन्छ ।